Ama-biscuits nama-cookies factory - ama-biscuits e-china abakhiqizi, abahlinzeki
Ikhekhe lenyanga ngumkhiqizo webhaki waseShayina odliwa ngokwesiko phakathi noMkhosi Waphakathi Nokwindla. Umkhosi umayelana nokwazisa kwenyanga nokubuka iNyanga, futhi amakhekhe enyanga athathwa njengokudla okumnandi okubaluleke kakhulu. Amaqebelengwane enyanga anikelwa phakathi kwabangane noma emibuthanweni yomndeni ngenkathi kugujwa umkhosi.
Singakunika izinhlobo eziningi zamakhekhe enyanga, njengamaqebelengwane wenyanga ezinhlanu-izinhlamvu, iqanda le-yolk ikhekhe lenyanga, ikhekhe lenyanga le-lotus, ikhekhe le-bean unamathisela inyanga, ikhekhe lenyanga lesitayela seCanton, njll.
TIbhisikidi lakhe le-crispy, noma i-cracker, ungomunye wabathengisi bethu abakhulu eminyakeni edlule ngentengo yokuncintisana, efanelekile ukushintshwa kwesidlo sasekuseni, isikhathi sekhefu lehhovisi, ukukhempa, ukuhlangana kwabangane.
Ukulawulwa okuqinile kusebenza kuzo zonke izinqubo, kusuka ekuthengisweni kwempahla eluhlaza, ukucutshungulwa nokuhlolwa kwekhwalithi ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlangabezana nokuhambisana nemithetho efanele, kanye nezidingo zamakhasimende.
Izinti zethu zebhasikidi kanye noshizi zenziwe ngofulawa we-premium organic, ogaywa ukolweni okhethwe ngokucophelela wase-Australia nebhotela laseZelanian. Ngemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme nobuchwepheshe obumnandi, i-crispy futhi inokunambitheka koshizi ocebile. Amakhasimende adonswa ngamaphakeji ayo asemfashinini futhi angahlanganyela nabangani uma enamaphathi noma ekuhambeni ndawonye.
Amakhukhi ebhotela ngokuvamile aziwa njengamakhukhi wesitayela saseDenmark, asetshenziselwa kakhulu isikhathi sikaKhisimusi. I-Butter Cookie yethu yenziwa ngezinto ezibonakalayo ze-premium nebhotela. Kubhakwe ngobuchwepheshe bendabuko namafomula, okwenza ukuthi kunambitheke okumsulwa, okumnandi, okubushelelezi nokumnandi. Ucezu ngalunye lunombala wegolide ophelele. Singangeza iyogathi, ubisi noshokoledi ngokuya ngezicelo ezahlukahlukene zamakhasimende zokwenza amakhukhi ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene. Kungaba isipho esihle ngoKhisimusi, usuku lokuzalwa noma isikhumbuzo, njll.
Amabhisikidi Obisi lweCalcium
PUhlobo lomkhiqizo: Ibhisikidi eliqinile
Izithako: Impuphu kakolweni, ushukela ohlanganisiwe, uwoyela wamantongomane, iqanda elisha, ubisi oluyimpuphu, izithasiselo zokudla (i-sodium hydrogen carbonate, i-ammonium hydrogen carbonate, i-sodium metabisulphite), i-calcium carbonate.
Ukunambitheka: Ibhisikidi Langempela / leCalcium-Milk labadala
Specification: Izikhwama ezingama-54g * 80 / CTN
225g * 24 izikhwama / CTN
Pi-ackage: Izikhwama zangaphakathi, Amabhokisi angaphandle. (Amabhokisi ayi-1000 kwisitsha ngasinye se-GP.)
Impilo eshalofini: Izinyanga eziyi-8
Isitoreji: indawo epholile neyomile，gwema ukushisa okuphezulu，ilanga eliqondile noma izindawo ezinomswakama.
Cukuqeqeshwa: HACCP, ISO9001: 2015, ISO22000: 2005
Lawa mabhisikidi abhalwe ngama-alfabhethi / ezilwane azoba izinkumbulo ezinhle ebuntwaneni bakho. Bazofunda ulwazi oluyisisekelo ngokujabulela amabhisikidi amnandi. Imikhiqizo ye-Great Value ihlinzeka imindeni ngokuthenga okungabizi kakhulu, okusezingeni eliphakeme kanye nezinketho ezisetshenziswayo zasendlini. Ngezigaba zethu ezahlukahlukene zemikhiqizo, sikunikeza ngemikhiqizo eyahlukahlukene yezidingo zemakethe yakho.
Izingane bhisikidi ku-can
Izithako: Ufulawa Wokolweni, Ushukela Ohlanganisiwe, Uwoyela Wamantongomane, Amafutha Esundu, Amaqanda Aphezulu, Ubisi Lobisi, I-Ammonium Bicarbonate, I-Sodium Bicarbonate, I-Sodium Metabisulfite, I-Calcium Carbonate, i-Niacin, I-Zinc Gluconate, I-Sodium ferric ethylenediamine tetrarate, ingqikithi edliwayo.
Ukunambitheka: Original / Ithanga / Carrot
Specification: Amathini angama-80g * 12 / CTN
Pi-ackage: Amathini angaphakathi, amabhokisi angaphandle. (Amabhokisi ayi-1200 ngesiqukathi se-GP esingu-20.)
Isitoreji: indawo epholile neyomile，gwema ilanga eliqondile.
Izithako: ufulawa kakolweni, uwoyela wesundu, i-bran bran edliwayo, izithasiselo zokudla (i-maltitol liquid, i-xylitol 5%, i-ammonium bicarbonate, i-sodium bicarbonate), uketshezi lweqanda lonke, isesame, isitashi sommbila esidliwayo, i-oatmeal, usawoti odliwayo.
Puhlobo lomkhiqizo: Ibhisikidi elimnandi
Ukunambitheka: Okwangempela / i-Xylitol
Specification: 365g * 16 izikhwama / CTN (Izikhwama ezincane ezizimele ngaphakathi)
Iphakheji: Izikhwama zangaphakathi, amabhokisi angaphandle (cishe amabhokisi angama-600 ngesitsha se-20GP)
Impilo eshalofini: Izinyanga eziyi-12
Cukuqeqeshwa: HACCP, ISO9001: 2015
Amaqebelengwane amahlanu okusanhlamvu
Izinhlamvu ezinhlanu zisho isesame emnyama, isesame emhlophe, iphenathi, ubhontshisi omnyama nama-oats. Ngemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme kanye nobuchwepheshe obumnandi be-bhisikidi elinamafutha aphansi, i-Five Grain Biscuit yethu ayinamafutha amaningi futhi iphakeme nge-calcium nefomu lezinto zokwakha. Amakhasimende adonswa ukubukeka kwawo okuhle, ukuthungwa okukhanyayo nokunambitheka okusanhlamvu okucebile. Futhi kulula ukuphatha nokuphatha ngenxa yamaphakeji amancane ngamanye. Futhi sinamandla okuthuthukisa ukunambitheka okusha okuhlukile kwalolu chungechunge ngokuya ngezidingo zamakhasimende nezimakethe, ngakho-ke ama-oda e-OEM amukelwa njalo.
Amabhisikidi okusanhlamvu aphelele, njengoba igama liphakamisa, kusebhisikidi elengeziwe ngokhula lukakolweni, okusanhlamvu okuluhlaza, ufulawa ophelele kakolweni nezinye izinto zokusetshenziswa, ukuze okuqukethwe kokudla kwe-fiber ebhisikidi kukhule kakhulu. Futhi sinamandla okuthuthukisa ukunambitheka okusha okuhlukile kwalolu chungechunge ngokuya ngezidingo zamakhasimende nezimakethe. Ukucaciswa okuhlukahlukene namaphakeji atholakalayo ngezidingo zakho ezihlukile. Phonsa izidingo zakho, okusele kusishiyele thina.
Ukudla Amakinati Anosawoti, Izingane Amabhisikidi, Ikhukhi leLadyfinger, Amaphakethe Esoso Soy, Induku entsha ye-Bean Curd, I-Hawthorn Strip,